HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ao Tolède no tena ahitana ny tantara sy kolontsaina mampiavaka an’i Espaina. Lasa anisan’ny Lova Iraisam-pirenena i Tolède tamin’ny 1986, ary mahasarika mpizaha tany maro
MISY faritra samihafa sy olona isan-karazany any Espaina. Fahita any ny sahana varimbazaha sy tanimboaloboka ary hazo oliva. Tsy lavitra an’i Afrika io firenena io, satria 14 kilaometatra monja ny ranomasina manasaraka azy ireo.
Any atsimoandrefan’i Eoropa no misy an’i Espaina. Maro no nifindra monina nankany, anisan’izany ny Fenisianina sy ny Grika ary ny mponin’i Carthage avy any Afrika Avaratra. Resin’ny Romanina ilay faritra, tamin’ny taonjato fahatelo Talohan’i Kristy, ka nantsoiny hoe Hispanie. Ny Visigoths sy ny Silamo taranaka Arabo indray no nibodo azy io tatỳ aoriana. Mbola ahitana soritry ny kolontsain’izy ireo any.
Olona 68 tapitrisa mahery no nitsidika an’i Espaina tamin’ny 2015. Mahasarika azy ireo ny hafanana, ny torapasika mivolombolamena, ny zavakanto, ny tantara, ary ny taotrano mampiavaka an’ilay firenena. Be mpitia koa ny sakafo espaniola, toy ny hazandranomasina, jambon, voamaina be fangarony, salady, ary legioma asiana menak’oliva fotsiny na andrahoina. Malaza eran-tany ny paella (vary maina mifangaro legioma sy hazandrano), tapas (karazana tsakitsaky), ary ny atody endasina miaraka amin’ny ovy sy persily.
Mariscada sakafo misy hazandranomasina
Sariaka ny mponina any. Katolika ny ankamaroany, nefa vitsy no mamonjy Lamesa. Nifindra tany Espaina ny olona maro avy atỳ Afrika, Amerika Latinina, ary Azia, tato ho ato. Betsaka no tia miresaka momba ny zavatra inoany sy ny fomba amam-panaony. Manararaotra miresaka amin’izy ireny ny Vavolombelon’i Jehovah, ka afaka mampahafantatra an’izay tena ampianarin’ny Baiboly.
Vavolombelona 10 500 mahery, tamin’ny 2015, no nanolo-tena hanorina na hanavao Efitrano Fanjakana 70, izay trano fivorian’izy ireo. Nomen’ny kaominina ny tany sasany nanorenana azy ireny. Te hanampy an’ireo mpifindra monina koa ny Vavolombelona any, ka mandamina fivoriana amin’ny fiteny 30 mahery ankoatra ny teny espaniola. Maherin’ny 186 000, tamin’ny 2016, no nanatrika ny fivoriana manokana natao hahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy Kristy.
Firenena voalohany eran-tany mpamokatra menak’oliva i Espaina.
I Teide, any amin’ny Nosy Canaries, no tendrombohitra avo indrindra any Espaina. Mahatratra 3 718 metatra ny haavony. Izy io no volkano fahatelo avo indrindra eran-tany raha refesina hatrany amin’ny fotony any ambany ranomasina.
FITENY BE MPAMPIASA: ESPANIOLA, BASQUE, CATALAN, GALICIEN, ARY VALENCIEN
MPONINA: 46 439 000
TOETANY: MAFANA BE NEFA METY HANGATSIAKA BE KOA REHEFA RIRININA
Mahatratra telo tapitrisa isan-taona ny mpizaha tany any, na dia mitokana aza ilay firenena. Fa inona no mahaliana azy ireo any?
Mpifindrafindra monina ny Kazakh fahiny, ary nipetraka tao anaty tranolay yourte. Mbola hita amin’ny fomba fiainan’ny olona any ny fomba amam-panaon’ny razambeny.
Malaza ho tia mandray vahiny sy manaja olona ny mponina any Kirghizistan. Ho hitanao ato ny fombafomban’izy ireo.
Inona no itiavan’ny mpizaha tany mankany amin’io firenena kely io, na fahavaratra na ririnina?
Fitsidihana An’i Ouzbékistan
Fantaro bebe kokoa ny momba an’i Ouzbékistan. Anisan’izany ny hoe niovaova foana ny abidy nampiasaina tany.
Fitsidihana An’i Nikaragoà
Ao ihany no ahitana ranomamy misy hazandrano fahita any an-dranomasina, toy ny antsantsa, trondro mivava-tsofa, ary bekapoka.
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Espaina
Soratra Fandikana boky MIFOHAZA! Avy Amin’iza ny Hery Miafina?
Raki-peo Fandikana raki-peo MIFOHAZA! Avy Amin’iza ny Hery Miafina?
Hizara Hizara MIFOHAZA! Avy Amin’iza ny Hery Miafina?
Avy Amin’iza ny Hery Miafina?
MIFOHAZA! Avy Amin’iza ny Hery Miafina?